Filoha Rajoelina: fotodrafitrasam-pampandrosoana any Vakinankaratra | NewsMada
Filoha Rajoelina: fotodrafitrasam-pampandrosoana any Vakinankaratra
Maro ny fotodrafitrasa aorina any Antsirabe. Anisan’ny tena mampiavaka azy ny fanohanana mivantana ny fanofanana ny tanora sy ny olona sahirana hampivoatra ny fivelomany.
Nitsidika an’Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra ny filoha Rajoelina, ny faran’ny herinandro teo. Anisan’izany ny fotodrafitrasa roa, ny Foibe fanofanana arakasa mikasika ny fambolena, sy ny Foibe fanofanana ho an’ny fandaharanasa Fihariana. Ho afaka miasa avy hatrany ny tanora mahavita fiofanana avy amin’ireo foibe roa ireo.
Nosantarin’ny filoham-pirenena koa ny fananganana foibe fanadiovan-drano fisotro any Andraikiba Antsirabe. Ho avo roa heny ny rano ho azo, hahatratra 700 m3 ny hadirin’ny rano ho azo rehefa vita izany, raha 450 m3 amin’izao fotoana izao. Eo koa ny foibe famokarana herinaratra avy amin’ny masoandro, manana tanjaka 4,9 Mw, hamatsy jiro an’Antsirabe sy ny manodidina, miampy toeram-panofanana Food & energy, hapetraka any Tsaratanana Antsirabe. Toerana entina hanofanana mikasika ny teknolojia herinaratra avy amin’ny masoandro (photovoltaïque) mahaleotena, ilaina amin’ny teknikam-pambolena biolojika, ny fambolena maoderina, ny nofon-tany, sns.
Tanora sy ny sahirana
Notsidihin’ny filoha Rajoelina koa ny fizotry ny asa fanorenana ny foibem-piofanana sy ny hopitaly ho an’ny reny sy ny zaza, vatsin’ny Fondation Mohamed V. Ho afaka handray mpianatra hatrany amin’ny 1.000 ity foibe ity, miompana amin’ny fizahantany, ny fandraisam-bahiny ary ny asa vaventy. Marihina fa tsy handoavam-bola ny fitsaboana mifandray amin’ny fiterahana amin’ity hopitaly ity. Nojeren’ny filoha koa ny toerana fambolena zana-kazo any Andranonahoatra Mandaniresaka, izay efa manana zanakazo maherin’ny 4 tapitrisa.
Ankoatra ny fanofanana, natomboka koa ny fandaharanasa fanohanana ny fianakaviana sahirana any Vinaninkarena. Anjatony ny trano fonenana haorina, hisy ny toeram-piompiana akoho, omby, tsena iombonana, velaran-tany 11 ha, hambolena. Voalohany aty Afrika ity fitsinjovana ny sahirana ity, mba hananan’izy ireo trano fonenana tsara sady ho afaka mivelona.
Nomena fiara koa ny mpitandro filaminana hampanjakana ny fahalemana.